Voalohany, fampifangaroana, tanky fampifangaroana 20 set 1L; Ny hafainganam-pandehan'ny fampifangaroana dia azo ovaina; Mora mivoaka ny mpanamboatra mixer; Ny fotoana CW sy ny fotoana CCW dia azo ovaina; Tank afaka 90degree misokatra ho an'ny famoahana mora foana faharoa, extrusion, 1 set 10L tank; Sekily avy any an-damosina ary manindry fr ...
Amin'ny taona 2020, manatrika ny foara CBE any Shanghai izahay manomboka ny faha-12-12 Jolay. Mampiseho ny vokatrao lehibe izahay, toy ny milina famenoana molotra mihodina, milina famenoana mascara famenoana karazana masomara, masinina manery vovoka paompy, milina fanoratana marindrano, fonosana kosmetika ho an'ny lokon'ny molotra, l ...
Izahay dia mamolavola ny milina famenoana swires ho an'i Estee Lauder
Ny milina famenoana modely EGSF-01A dia milina famenonana mafana mandeha ho azy natao ho an'ny famokarana ranon-javatra sy gel toner. Ny latabatra fihodinany amin'ny alàlan'ny pucks 12, toeram-piasana 3 Misy 4set 10 tank fanafanana 10 L miaraka amina mixer Operator mitondra vilany / tavoahangy ...
2020 Desambra nohavaozina milina fanerena vovoka automatique automatique
Ny masinina manery vovoka dia afaka manao aloky ny maso, mena mena, mofomamy roa làlana, fototra fanosotra noterena, vovoka voatetika tarehy. Ny masinina manapotsitra vovoka dia afaka manamboatra vovoka voatetika boribory ary koa vovoka voatetika toradroa ho an'ny milina iray. Ny milina fanodinana vovoka automatique dia karazana rotary mac ...
2020 Oktobra ho an'ny milina famenoana molotra, manao fanitsiana izahay momba ny fiovan'ny tanky fanafanana
Araka ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa dia manamboatra milina famenoana molotra amin'ny tanky fanafanana izahay. Ny tanky fanafanana dia miaraka amin'ny fitaovana mixer sy presseur mba hanampiana tsindry ho an'ny ranon-drindrina avo dia mihetsika tsara rehefa mameno. Ny tanky fanafanana dia tanky palitao, afovoany dia heatin ...